Sony က Dolby Vision Blu-ray Player နဲ့ Dolby Atmos Receiver ကို ထုတ်ဖော်ပြသ -
Sony က Dolby Vision Blu-ray Player နဲ့ Dolby Atmos Receiver ကို ထုတ်ဖော်ပြသ
Entertainment ဈေးကွက်ထဲမှာ နာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ Sony ကနေ အခုအချိန်မှာ 4K Dolby Vision HDR စနစ်နဲ့ Video Playback ကို Support ပြုလုပ်တဲ့ Blu-ray Player တစ်ခုနဲ့ Dolby Atmos Audio ကိုပါ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ A/V Receiver တစ်ခုကို ယခုနှစ် CES 2018 ပွဲမှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး UBP-X700 လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ Blu-ray Player ဟာ HDR 10 နဲ့ Dolby Vision ပါဝင်တဲ့ 4K Blu-ray Disc တွေကို ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ Player တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် Netflix ၊ Amazon Prime Video နဲ့ YouTube လိုမျိုး Internet Services က Streaming အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Built-in Applications တွေထည့်သွင်းပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ထပ် တစ်ခုကတော့ Sony ကနေ လက်ရှိ Home Theater Setup တွေကို အဆင့်တစ်ခုမြှင့်တင်ပေးစေမယ့် STR-DH790 A/V Receiver ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sony ရဲ့ အဆိုအရတော့ အဆိုပါ Receiver ဟာ HDR Format တွေကို ဘယ်လိုမှ Signal Loss မရှိပဲ ပေးပို့နိုင်တဲ့ Receiver တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Sony ကနေ အခု Product အသစ် ၂ ခုကို Sony ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် TV တွေနဲ့ အသုံးပြုဖို့အတွက် ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Sony ရဲ့ လက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၃ သောင်းတန် 4K Projector နဲ့ပါ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့ ပြောကြားသွားခြင်းမရှိပါဘူး။
Entertainment ဈေးကှကျထဲမှာ နာမညျကွီးဖွဈတဲ့ Sony ကနေ အခုအခြိနျမှာ 4K Dolby Vision HDR စနဈနဲ့ Video Playback ကို Support ပွုလုပျတဲ့ Blu-ray Player တဈခုနဲ့ Dolby Atmos Audio ကိုပါ ဖမျးယူနိုငျတဲ့ A/V Receiver တဈခုကို ယခုနှဈ CES 2018 ပှဲမှာ ပွသခဲ့ပါတယျ။
ပထမဆုံး UBP-X700 လို့ အမညျပေးထားတဲ့ Blu-ray Player ဟာ HDR 10 နဲ့ Dolby Vision ပါဝငျတဲ့ 4K Blu-ray Disc တှကေို ဖှငျ့ပေးနိုငျတဲ့ Player တဈခုဖွဈပွီးတော့ အငျတာနကျကတဈဆငျ့ Netflix ၊ Amazon Prime Video နဲ့ YouTube လိုမြိုး Internet Services က Streaming အသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျလညျး Built-in Applications တှထေညျ့သှငျးပေးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
နောကျထပျ တဈခုကတော့ Sony ကနေ လကျရှိ Home Theater Setup တှကေို အဆငျ့တဈခုမွှငျ့တငျပေးစမေယျ့ STR-DH790 A/V Receiver ပဲဖွဈပါတယျ။ Sony ရဲ့ အဆိုအရတော့ အဆိုပါ Receiver ဟာ HDR Format တှကေို ဘယျလိုမှ Signal Loss မရှိပဲ ပေးပို့နိုငျတဲ့ Receiver တဈခုဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
Sony ကနေ အခု Product အသဈ ၂ ခုကို Sony ရဲ့ နောကျဆုံးထှကျ TV တှနေဲ့ အသုံးပွုဖို့အတှကျ ထှကျရှိထားတာဖွဈပွီးတော့ Sony ရဲ့ လကျရှိနောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ ဒျေါလာ ၃ သောငျးတနျ 4K Projector နဲ့ပါ တှဲဖကျအသုံးပွုနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဈေးနှုနျးတှကေိုတော့ ပွောကွားသှားခွငျးမရှိပါဘူး။
လက်ပ်တော့စပီကာတွေအတွက် Dolby ဒီဇိုင်းထုတ်နေ
Dolby Atmos audio tools နဲ့ Dolby Vision imaging technology ဆိုတဲ့ နာမည်တွေကို နည်းပညာ၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဆိုရင်…
iOS 11 မှာ "it" နဲ့ "is" ကို Auto-Correction က မှားယွင်းပြီး "I.T" နဲ့ "I.S" အဖြစ်ပြောင်းလဲနေ
iOS 11 မှာ "it" နဲ့ "is" ကို Auto-Correction က မှားယွင်းပြီး "I.T" နဲ့ "I.S" အဖြစ်ပြောင်းလဲနေ Apple…
VR နဲ့ HDR Video Edition ကို စတင် Support ပြုလုပ်ပြီဖြစ်တဲ့ Apple ရဲ့ Final Cut Pro
VR နဲ့ HDR Video Edition ကို စတင် Support ပြုလုပ်ပြီဖြစ်တဲ့ Apple ရဲ့ Final Cut Pro Apple…
Dual Selfie Camera နဲ့ Sony Xperia XA2 Ultra ရဲ့ ပုံရိပ်တွေထွက်ပေါ်လာ
Dual Selfie Camera နဲ့ Sony Xperia XA2 Ultra ရဲ့ ပုံရိပ်တွေထွက်ပေါ်လာ Sony ကနေ မကြာခင်မှာ Sony ရဲ့…
နောက်ဆုံးတော့ ဖုန်းဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလဲတော့မယ့် Sony
နောက်ဆုံးတော့ ဖုန်းဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလဲတော့မယ့် Sony Sony ကနေ သူရဲ့ Flagship Series ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Xperia Z Series, X Series ဖုန်းတွေနဲ့…
ဓာတ်ပုံ နဲ့ Video များမှာ Filter များ ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် Feature ကို Facebook စမ်းသပ်
ဓာတ်ပုံ နဲ့ Video များမှာ Filter များ ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် Feature ကို Facebook စမ်းသပ် Facebook ဟာ Livestreaming Video…
Facebook က Video အရှည်တွေကို News Feed မှာ များများပြပေးဖို့ လုပ်ဆောင်နေ Facebook ဟာ သူတို့ရဲ့ News Feed…
2018 မှာ Android ဖုန်းအတော်များများ Video ကို 4k HDR Resolution ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မည်
[ Zawgyi ] 2018 မှာ Android ဖုန်းအတော်များများ Video ကို 4k HDR Resolution ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မည်။ မကြာသေးမီက…
OnePlus 5T ကို Sandstone White Finish နဲ့ ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ
OnePlus 5T ကို Sandstone White Finish နဲ့ ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ OnePlus 5T စမတ်ဖုန်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီးတော့ Flagship စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့…
Android Oreo ပထမဆုံးပါဝင်တဲ့ Sony Xperia XZ1 ကို စတင်ရောင်းချ
Android Oreo ပထမဆုံးပါဝင်တဲ့ Sony Xperia XZ1 ကို စတင်ရောင်းချ Sony Mobile ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Sony…
Happy Birthday Adele! ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသည်းကျေ်ာလေး အင်္ဂလန်က Adele ရဲ့ ၂၉ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အမည်ရင်း Adele Laurie Blue Adkins လို့ အမည်ရတဲ့ Adele ဟာ မေလ ၅ရက် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ မွေးပြီး အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အဆိုတော်နဲ့ သီချင်းရေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Album “19” ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ငွေကြေးအရရော၊ အနုပညာအရရော အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အခွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယ Album “21” ကိုတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အဲ့အခွေရဲ့ […]
ဆောင်းတွင်းမနက်ခင်းမှာ လမ်းလျှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ (၃)ခု
[ZawGyi] ဆောင်းတွင်းမနက်ခင်းမှာ လမ်းလျှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ (၃)ခု ဆောင်းရာသီဆိုရင် လူတော်တော်များများက မနက်ခင်းမှာ အားကစားလုပ်ဖို့ ၊ လမ်းလျှောက်ဖို့တက်ကြွနေကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဆိုရင်လည်း ကန်တော်ကြီးအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်၊ မြကျွန်းသာ၊ တံတားဖြူ၊ ၊ သုဝဏ္ဏ စသဖြင့် လမ်းလျှောက်ဖို့ အားကစားလုပ်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တယ် အားကစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း လုံခြုံစ်ိတ်ချရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သွားလာလှုပ်ရှားလို့ အဆင်ပြေတဲ့ အနေအထားရှိရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ လမ်းလျှောက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာ (၃)ခုကို ရှာဖွေကြည့်ရရင်. . . ကန်တော်ကြီးအမျိုးသားဥယျာဉ် ကန်တော်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ အားကစားလုပ်ဖို့ လမ်းလျှောက်ဖို့အဆင်အပြေဆုံးနေရာလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ သစ်တောဥယျာဉ်ဘက်မှာလမ်းလျှောက်မလား၊ သိမ်ဖြူပေါက်က ဝင်မလား၊ ဗဟန်းသုံးလမ်းဘက်ကသွားမလား၊ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်ဝင်ပေါက်က ဝင်မလား အကုန် Free […]
ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ သတင်း ၅ ခု (၆.၈.၂၀၁၇)
[Zawgyi] (၁) ၂၀၁၇ ဂျာမန်စူပါဖလားပွဲမှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်က ဒေါ့မွန်ကို ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲသွားပါတယ်။ (၂) မနေ့က Junction City Promotion ဧရိယာမှာ နီနီခင်ဇော် ရဲ့ Super Red နှုတ်ခမ်းနီ အမျိုးအစားအသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Floral Matte , Limited Edition တို့အပါအဝင် နှုတ်ခမ်းနီသစ်အမျိုးအစားငါးမျိုး နဲ့မျက်တောင်တု ခြောက်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (၃) မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြပ်ဆေးဆိုင်က ပြင်ပဆေးဆိုင်များထက် ဈေးပိုရောင်းနေတာကြောင့် ဆေးရုံကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက တစ်လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပါတော့မယ်။ (၄) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်(ဗဟို)နဲ့ အသားတိုးကြက်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ ကြက်သားနဲ့ကြက်ဥများ အန္တရာယ်ကင်းစွာချက်ပြုတ်စားသုံးနိုင်ရေး ကြက်သားစားပွဲတော်ကို ဒီနေ့ မနက်9နာရီကနေ 12 […]
[Zawgyi] မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေဟာ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းကိုယ့်ကြငှန်းနဲ့ ချစ်ခင်ကြည်ဖြူစွာ နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ၃ကြိမ်တိုင် မတရားကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲပြီး ၁၈၈၅ခုနှစ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ HUAWEI nova 2i အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန် ကိုလိုနီစနစ်ဆိုးကို ဒူးထောက်မခံခဲ့တဲ့ ရွှေမြန်မာတွေရဲ့ လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျော်စိုးအောင် (အခရာ) www.akhayar.com Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်တင်ဆက်နေသည့် စာမျက်နှာများတွင် အခရာမှတင်ဆက်ထားသည့် ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများကို ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရယူထားခြင်းမရှိဘဲ စီးပွားဖြစ် ကူးယူသုံးစွဲနေသည်များကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။ အခရာစာမျက်နှာအား တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ဝေမျှသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်သော်လည်း စီပွားဖြစ်တည်ထောင်ထားသည့် စာမျက်နှာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ကူးယူတင်ဆက်နေသည်များကိုမူ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခရာမီဒီယာမှတင်ဆက်နေသည့် […]
ဘဝမှာအလိုအပ်ဆုံးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါလို့ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီ
[Zawgyi] ဘဝမှာအလိုအပ်ဆုံးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါလို့ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီ အနုပညာလောကရဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီက အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ခပ်ကျဲကျဲဖြစ်လာပြီး၊ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာလည်း ပရိသတ်တိုင်းရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုမရရှိနိုင်တာကိုလည်း ကောင်းကောင်းသိလာပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သူမက အခုလိုဆိုပါတယ်။ Heineken Facebook Page သို့ “သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ကို လူတိုင်းကတော့ မချစ်နိုင်တာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းမိတာအမှန်ဘဲ။ အတိတ်ကုသိုလ်ကံရယ် အခုဘဝကုသိုလ်ကံရယ်ကြောင့် အစ်မအနေနဲ့ အကယ်ဒမီရဖူးခဲ့တယ်ပေါ့။ ပျော်စရာ နာကျင်စရာတွေ ရောနှောနေခဲ့တဲ့အချိန်၊ အခန်းထဲမှာငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အကယ်ဒမီမရခဲ့ရင် ကောင်းမှာဘဲလို့လည်း တွေးခဲ့ဘူးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ အစ်မဘဝမှာ အလိုအပ်ဆုံးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းကနေသေတဲ့အထိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသာအဓိကပါ တန်ဖိုးအထားဆုံးပါ။ ဟိုးအရင်အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဘူးပါတယ်။ […]
အနားမှာရှိတဲ့ ပုလင်းလေးတစ်လုံးထဲကလာတဲ့ အမွှေးနံ့တစ်ခုဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေအားလုံးကို ချက်ချုင်းဆိုသလို လျော့ကျသွားအောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိရဲ့လား။ အဲ့ဒါ က အခြားမဟုတ်ပါဘူး ရနံ့ကုထုံးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ရနံ့ကုထုံးဆိုတာက အပင်တွေကနေ သဘာဝအတိုင်း ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ ရနံ့ကိုသုံးပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ သွေးလေ ညီမျှအောင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့နည်းပြီး ကျန်းမာလန်းဆန်းလာအောင် ရနံ့သုံးပြီး ကုသတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရနံ့ကုထုံးဟာ ပြုလုပ်ရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက် အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ အမွှေးဆီတွေအားလုံးဟာ ရာနှုန်းပြည့် သဘာဝအပင်၊ အမြစ်၊ အရွက်၊ အစေ့တွေနဲ့ ပန်းပွင့်တွေကနေ စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ရနံ့ကုထုံးကို ပုံစံသုံးမျိုး နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်နည်းက ရနံ့ဆီကို အနှိပ်ခံတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရနံ့ဆီက ပျစ်ခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ကို သံလွင်ဆီ […]
၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ဓာတ်ပုံ (၂၀)
၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ဓာတ်ပုံ (၂၀) ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ ပြီးဆုံးပါတော့မယ်။ ဒီနှစ်မှာ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အလှုပ်အခတ်အဖြစ်အပျက်တွေကို မီးမောင်းထိုးပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပြီး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီက ပြောပြတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေကတော့.. အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ခံသမ္မတကြီး ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ်တစ်ယောက် ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ၄၅ ယောက် သမ္မတအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာပုံဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှာ အမျိုးသမီးထုချီတက်ပွဲအတွက် လူတွေစုရုံးရောက်ရှိနေပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချီတက်ပွဲဟာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ LGBT အခွင့်အရေးနဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုမရှိ၊ သာတူညီမျှမှုရှိရေးတွေအတွက်ပါ တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချီတက်ပွဲမှာ လူပေါင်း ၄၄၀၀၀၀ ကနေ […]
ထန်းရည် သောက်သုံးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
အညာဒေသ ရောက်ပြီဆို ရှုမဆုံးနိုင်တဲ့ လယ်ကွင်းကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း ထန်းရည်သောက်ရတဲ့ အရသာကလည်း ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူး။ ထန်းရည် ဆိုတာမျိုးကလည်း ဆိုင်ကြီးကန္နားကြီးမှာ ပုလင်းတွေဖန်ခွက်တွေနဲ့ ထိုင်သောက်လို့ အရသာရှိမယ်လို့ မထင်မိပါဘူး ။ ထန်းလက်တဲလေးထဲမှာ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်၊ မြေအိုးကလေးထဲက ထန်းရည်တွေကို ခပ်စုတ်စုတ်ခွက်ကလေးနဲ့ နှစ်ခပ်ပြီး သောက်ရမှ ထန်းရည်ရဲ့ အနှစ်သာရပိုပေါ်လွင်မယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သပ်ရပ်ခြင်း စုတ်ပြတ်ခြင်းဆိုတာထက် လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အရသာကိုပါ ခံစားသုံးဆောင်လိုလို့ပါပဲ။ ထန်းရည်သောက်ရခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပါမယ်။ ၁။ မျက်လုံးအားကောင်းစေတယ်။ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သက်စောင့်ဓာတ် (Vitamin C & B1) ၊ ဟာ ထန်းရည်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အတွက် မျက်လုံးအားကောင်းစေပါတယ်။ […]
လမ်းလျှောက်ရင်း ဖုန်းသုံးနေတဲ့အတွက် ရထားတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး
[Zawgyi] လမ်းလျှောက်ရင်း ဖုန်းသုံးနေတဲ့အတွက် ရထားတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃) ရက်နေ့တုန်းက ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Amtrak မှ ပြေးဆွဲနေတဲ့ ရထားတစ်စင်းဟာ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Haine City မြို့မှ (၁၁) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို တိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ HUAWEI Nova 2i အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန် သူမဟာ စားသောက်ဆိုင်ကနေ အိမ်ကို ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ အခုလို အတိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမပြုဘဲ နားကြပ်တပ်ကာ စမတ်ဖုန်းသုံးနေတဲ့အတွက် အတိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ မီးရထားအာဏာပိုင်တွေက ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၃ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လယ်ခင်းတုန်းက တွဲဆိုင်း (၁၂) တွဲပါတဲ့ ရထားဟာ ၁နာရီ (၆၈) […]
Entertainment Knowledge Lifestyle Movie
MARVEL က မပိုင်တော့တဲ့ စူပါဟီးရိုးကိုးယောက်
နည်းပညာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခုခေတ်မှာ စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကားတွေဟာ ရုပ်ရှင်ကုမ္မဏီများရဲ့အာရုံစိုက်စရာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်က လူစွမ်းကောင်းကားတွေနဲ့ အခုခေတ်ကစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေဟာ လုံးဝကိုကွဲပြားခြားနားသွားပါပြီ။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်၊ ဆက်တင်အပြင်အဆင်၊ ကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေ၊ များပြားလာတဲ့နည်းပညာရဲ့အားသာချက်တွေဟာ ရုပ်ရှင်လောကမှာအချက်အခြာကျတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်များရဲ့အသည်းနှလုံးကိုရယူပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ Avenger ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ထွက်ရှိလာချင်းချင်းပဲ ၁.၅. ဘီလီလံအကျိုးအမြတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နည်းတူပဲ Spiderman ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲဟာလည်း မထင်ရင်မထင်သလို box office record ကိုချိုးဖေါက်ပြီးအမြတ်အစွန်းတွေရရှိနေတာပါ။ Marvel ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေပေါ်က စူပါဟီးရိုးတွေဟာရုပ်ရှင်ကဏ္ဍနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာထုတ်ကုန်အသစ်တွေအဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကို ဆိုက်မြိုက်စွာရောက်ရှိလာခဲ့ကြလို့ အားလုံးဘဝင်ခိုက်အကြိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ Marvel ကတချို့စူပါဟီးရိုးတချို့ကို ရုပ်ရှင်ကုမ္မဏီတွေဆီ အခွင့်အရေးတွေနဲ့တကွလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်တဲ့အတွက် Marvel ကိုယ်တိုင်ကိုကမပိုင်တော့ပါဘူး။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကတည်းစပြီး Marvel ဟာ Sony, 20th Century Fox အစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဆီကို သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကမ်းလှမ်းပြီးအသုံးပြုခံစေခဲ့တာပါ။ […]